झ’ण्डै डेढ करो*डले हेरिस-केको भि’डियोमा यि यु’वतीले के गर्दैछिन ? (हेर्नुहोस भिडियो) – News543Online
झ’ण्डै डेढ करो*डले हेरिस-केको भि’डियोमा यि यु’वतीले के गर्दैछिन ? (हेर्नुहोस भिडियो)
June 1, 2021 adminLeaveaComment on झ’ण्डै डेढ करो*डले हेरिस-केको भि’डियोमा यि यु’वतीले के गर्दैछिन ? (हेर्नुहोस भिडियो)
हिँडेका अरु पनि १० जना भन्दा धेरै रहेछन् । हामी सबै ईटहरीबाट पूर्व लाग्यौ । हामी सबैलाई त्यो दिन सिलगुडी पुर्‍याए । मलाई भारतको बाटो हुँदै विदेश जाने कुरा पनि थाहा थिएन । सिलगुडीमा हामी जस्तै विदेश हिँडेका अरु ५० जना भन्दा धेरै महिला पर्खेर बसेका थिए । दलालले कसरी सीमा पार गराए, पत्तो पाइएन ।
सिलिगुडीबाट हामीलाई दिल्ली लगियो । त्यहाँ १३ दिन बसेपछि दिल्लीबाट कुवेत पठाए । रात परेपछि लगे ।उज्यालो नहुँदै विमान कुवेत पुग्यो । हिँडेका अरु पनि १० जना भन्दा धेरै रहेछन् । हामी सबै ईटहरीबाट पूर्व लाग्यौ । हामी सबैलाई त्यो दिन सिलगुडी पुर्‍याए । मलाई भारतको बाटो हुँदै विदेश जाने कुरा पनि थाहा थिएन ।
सिलगुडीमा हामी जस्तै विदेश हिँडेका अरु ५० जना भन्दा धेरै महिला पर्खेर बसेका थिए । दलालले कसरी सीमा पार गराए, पत्तो पाइएन । सिलिगुडीबाट हामीलाई दिल्ली लगियो । त्यहाँ १३ दिन बसेपछि दिल्लीबाट कुवेत पठाए । रात परेपछि लगे ।उज्यालो नहुँदै विमान कुवेत पुग्यो ।
उज्वल थापाकी निधन भएको छैन get well soon लेखेर 1 share
आजदेखि निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्दा एक वर्ष कैद हुने
हार्दिक श्रद्धाञ्जली हजुरको आत्माले शान्ति पाओस।